Sida loo nadiifiyo dhammaan ogeysiisyada Apple Watch ee watchOS 7 | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo nadiifiyo dhammaan ogeysiisyada Apple Watch ee watchOS 7
Sida loo nadiifiyo dhammaan ogeysiisyada Apple Watch ee watchOS 7
Casriyeynta watchOS 7 ee sanadkan waxay dishaa tilmaanta waxtarka leh ee Force Touch ee aan ku isticmaalnay Apple Watch in ka badan shan sano. Taasi waxay la macno tahay inay jirto hab cusub (oo aan sidaa u fududayn) oo lagu nadiifiyo dhammaan ogeysiisyadaada.
Waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Apple waxay ka fogaatay dhaqdhaqaaqyada xasaasiga ah ee cadaadiska tan iyo markii la bilaabay iPhone XR - iPhone-kii ugu horreeyay ee casriga ah oo aan lahayn 3D Touch. Waxay sidoo kale hoos u dhigtay shaashadaha xasaasiga ah ee iPhone 11, sidoo kale.
Marka, maahan wax la yaab leh (laakiin xaqiiqdii waa niyad jab) in casriyeynta software-ka ee sanadkan ay meesha ka saarayso dhaqdhaqaaqyada Force Touch ee Apple Watch, inkastoo xaqiiqda ah in dhammaan qalabka hadda jira ay wali isticmaali karaan.
Marka watchOS 7 u soo baxdo dhammaan, markaa, waxaad u baahan doontaa inaad la qabsato habab cusub oo wax lagu sameeyo oo aad markii hore u isticmaashay Force Touch. Mid ka mid ah waxyaalahaas ayaa ah inaad iska tuurto dhammaan ogeysiisyadaada.
Sida loo nadiifiyo dhammaan ogeysiisyada ku jira watchOS 7
Waxaa laga yaabaa inaad u maleyso isla markiiba ka dib markii aad u cusboonaysiiso watchOS 7 in awooda lagu nadiifiyo dhammaan ogeysiisyada qasabada kaliya ay meesha ka baxday. Taasi maahan kiis - laakiin badhanka cad oo dhan way adagtahay in la helo hadda.
Waa tan waxaad u baahan tahay inaad sameyso:
Hoos u dhig shaashadda Apple Watch si aad u aragto ogeysiisyadaada.
Hoos u dhig fartaada ama Crown-ka dhijitaalka ah ilaa aad ka gaadhayso meesha ugu sareysa ee liiska ogeysiiska.
Taabo kan cusub Clear All Badhanka.
Dhammaan ogeysiisyadaada isla markiiba waa la nadiifin doonaa. Wali waa hawl fudud oo qurux badan, laakiin waxaad ogaan doontaa inay qaadanayso waqti ka dheer isticmaalka dhaqdhaqaaqa Force Touch - gaar ahaan haddii aad haysatid liis dheer oo ogeysiisyo ah si aad u dhex rogto.
Waa ceeb in dhaqdhaqaaqyada Force Touch ay ka lumaan aaladaha jira ee weli awood u leh inay isticmaalaan. Laakiin waxay u badan tahay in Apple ay rabto inay hubiso khibrad isku mid ah dhammaan noocyada Watch.
Haddii ay taasi dhacdo, waxay runtii la macno tahay in moodooyinka soo socda ee Apple Watch - oo loo maleynayo inay imanayaan Sebtember 15 "Waqti Duulimaadyada" - ma yeelan doonaan shaashado xasaasi ah oo cadaadis leh.
Ganacsiyada maxalliga ah waxay ku muujin karaan tallaabooyinka 'caafimaadka iyo badbaadada' COVID-19 Google My Business
Sida loo helo iPhone leh Apple Watch
Qaar ka mid ah hagaajinta jeebka ugu fiican ee cimilada iOS 14